प्रधानन्यायाधीश जबराद्वारा पदभार ग्रहण, सर्वोच्च पुग्दा जे देखियो...(फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
प्रधानन्यायाधीश जबराद्वारा पदभार ग्रहण, सर्वोच्च पुग्दा जे देखियो...(फोटोफिचर)
आर्यन धिमाल , १८ पौष २०७५
काठमाडौं। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदभार ग्रहण गरेका छन्।
बुधबार बिहान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधिश जबराले दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन्।
त्यस अवसरमा उनले संचारकर्मीमाझ न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच प–याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधिश जबराले न्यायालयप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न संचारकर्मीहरुलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधिश जबराले न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने संकल्प पनि गरे। उनले प्रमाणको आधारमा न्याय दिन आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट मंगलबार अनुमोदन भएका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधिश जबराले बुधबार पदभार समेत ग्रहण गरेका हुन्।
चार वर्षे कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधिशमा नियुक्त भएका उनलाई पदभार ग्रहण गर्नेक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश तथा कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा भव्य स्वागत गरेका थिए।